काठमाडौँ-रियाद रुटमा हिमालयको उडान सुरु हुँदै; टिकटको लागी कँहा सम्पर्क राख्ने ? - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
काठमाडौँ-रियाद रुटमा हिमालयको उडान सुरु हुँदै; टिकटको लागी कँहा सम्पर्क राख्ने ?
नेपालबाट अन्तरराष्ट्रिय उडान भर्ने निजी क्षेत्रको वायुसेवा प्रदायक कम्पनी हिमालय एयरलाइन्सले काठमाडौँ – रियाद उडान पुन: सुरु गर्ने भएको छ। एअरलाइन्सले एक सुचना जारी गर्दै उडानको बारेमा जानकारी दिएको हो । उडान यहि २९ अगष्ट आईतवार बाट सुरु हुनेछ । उक्त दिन काठमाडौँ बाट बिहान ११:१५ मा उड्ने हिमालयको जहाज दिउँसो १४:१० (साउदी समय) मा रियाद उत्रनेछ ।
त्यस्तै सोहि दिन १५:१० मा रियाद बाट उक्त विमान फर्कने र नेपाली समय अनुसार राती २३:२५ बजे काठमाडौँ अवतरण गर्ने एअरलाइन्स द्वारा जारी सुचनामा बताईएको छ । यस अघि हिमालयको रियाद उडान केहि समय देखि स्थगित रहेको थियो । यँहा क्लिक गरेर तपाईले टिकटको अनलाईन बुकिंग गर्न सक्नुहुनेछ । एअरलाइन्सको अनुसार ईकोनोमी क्लासका यात्रुले ३० केजीको लगेज र ७ केजीको ह्याण्डब्याग बोक्न पाउनेछन् । यँहा क्लिक गरेर हिमालय एअरलाइन्सको लगेज पोलिसी बारे थप बुझ्न सक्नुहुनेछ ।
एअरलाइन्सले रियाद उडान सुचारु गर्ने जनाए संगै साउदीको रियाद क्षेत्र वरपर बसोबास गर्ने नेपाली श्रमिकहरुमा खुसियाली छाएको छ । तर उडान हप्तामा एक दिन मात्र हुने भएकाले केटि निराशा पनि छाएको छ । रियादमा टिकट बुकिंगको लागी Nesma Travel & Tourism [General Sales Agent (GSA)] Jareer Street, Al Malaz, Riyadh Phone: +966-11-2931236 मा सम्पर्क राख्न सकिने छ ।